8 Days Kenya Safari and Mombasa Beach - Ethiopian Tours and Travel
Camping, Halal, Photography, Safari, Snorkeling, Swimming
A safari to a Tree hotel for night game viewing, the spectacular bird life and scenery of a Great Rift Valley lake and one of Kenya’s finest game reserves — the Masai Mara, followed afterwards with a visit to the white sandy beach of the Kenya coast in Mombasa.
Return flights from Nairobi to Mombasa and transfers from Mombasa Airport to beach hotel
DAY 5: Mombasa Beach
The beaches of Mombasa are characterised by long stretches of white side, palm trees swaying in the breeze, coral reefs which break the power of the waves and provide a haven for snorkelling and scuba diving and beyond the deep blue sea teeming with game fish.
Depart after breakfast and drive back to Nairobi where you will connect to the flight to Mombasa. On arrival in Mombasa you are met and transferred to your beach hotel for accommodation on half board basis.
DAY 6: Mombasa Beach
Day at leisure at your beach hotel with accommodation on half board basis.
Be the first to review “8 Days Kenya Safari and Mombasa Beach” Cancel reply